छोटो कपडा लगाएर उत्ताउलो गाउने गायिका होईन म – लोक गायिका कला लम्साल – Sabaikoaawaj.com
Friday 2nd October 2020 । शुक्रबार, अशोज १६, २०७७
छोटो कपडा लगाएर उत्ताउलो गाउने गायिका होईन म – लोक गायिका कला लम्साल
मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५ 12:42:39 PM	मा प्रकाशित
नेपालको लोक गीत संगित क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो कला लम्साल । नेपाली मौलिक भाकालाई आँफैले सन्कलन गरेर २०० बढी गीतमा स्वर दीइसकेकी लम्साल लोक दोहोरी गीत संगितमा आएको बिक्रितिले लोक तथा दोहोरी क्षेत्र ध्वस्त हुनेहोकी भन्ने चिन्ता मनमा रहेको बताउनु हुन्छ । लोक दोहोरी गीत संगितमा समुह समुहको राजनीति चलेकाले नयाँ कलाकार उत्पादन गर्न गार्हो भएको बताउनुहुन्छ । यही सेरोफेरोमा रहेर चर्चित लोकदोहोरी गायीका कला लम्साल सँग हाम्रो सेरोफेरोले गरेको अन्तरङ प्रस्तुत गरेका छौ ।
कला लम्साल लोक संगीतिक क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
धन्यवाद, हा हा कसरी भन्नु अब, म सानै देखी गीत संगित तर्फ लगाव भएको मान्छे, स्कुल पढ्दा देखी मनमा लोक गीत संगितमा लगाव, गरायसी वातावारण त खासै संगीतक थिएन तर ईश्वरले दिनुभएको उपहारलाई निखार्दै, मेहनत गरेर नै यस क्षेत्रमा पाईला बढाए भन्नु पर्छ ।
यस क्षेत्रमा आउनु भन्दा अगाडि औपचारिक रुपमा संगीतको शिक्षा लिनु भयो कि भएन र ?
तनहुँ जिल्लामा जन्मेको म बच्चा बेला देखी नै गीत गाउथ्ये ग्रामीण क्षेत्र लोक गीत संगितमय थियो त्यसैलाई पच्याउदै गायीका त बने तर संगितको शिक्षा लिन पर्छ भन्ने लाग्यो अनी २०६३ सालमा स्वरको क्लास लिए । त्यो भन्दा पनि आफु सँग केही नभई संगितको क्लास लिनुको अर्थ थिएन त्यसैले ईस्वरको बारादान भयो भने त्यसलाई निखार ल्याउन पनि गीत संगित सिके ।
हाल सम्म कति गीत गाउनु भयो रु गीत रेकर्ड गर्नु र स्टेजमा गीत गाउनुमा के फरक छ र ?
मैले आज सम्म २०० बढी गीत गाए । फरक छ धेरै फरक छ रेकर्डिङमा सानो नट देखी स्केल मिलाउनु संगितको तालमा रेकर्ड गराउदा धेरै गाह्रो छ तर यत्तीकै मुखले गाउनु अलि सजिलो छ त्यसैले धेरै देख्न सकिन्छ ।
बर्तमान अवस्थामा लोक दोहोरी गीत, जातजातिका मौलिक गीत लोप हुँदै गईरहेको अवस्था छ, तपाईले यो क्षेत्रलाई उजागर गर्न, माथि उकास्न तपाईको भूमिका कस्तो हुन्छ र ?
बिशेष म लोकदोहोरी गायिका स्थानिय क्षेत्रमा बोलिने भाषा र सस्क्रिती बाटनै लोक गीतको सुरु भएको हो,त्यसैले लोकगित गाउनु पर्छ मौलिक गीतलाई सम्रक्षण गर्नु पर्छ । हो अहिलेको अवस्थामा आफ्नोपन हराउदै गईरहेको छ यो समयमा मैले लोक दोहोरीमा मौलिकता ल्याउने प्रयास गरेको छु । म आफु मौलिकता भन्दा बाहिर गएको छैन भन्ने लाग्छ ।
अहिलेको समयमा लोक गीत ग्रामीण क्षेत्रबाट सन्कलन गर्ने भन्दा पनि कोठामा बसेर लेखेर गाउँने गरिन्छ के यसले लोक गीतको उजागर होला र ?
कस्तो कठिन प्रश्न, दुबै पक्ष बराबर छ, गाउघर मेलापात जादा गाउने गीतमा सरल भाषा हुन्छ भने कोठामा बसेर एकान्तमा कल्पनामा डुबेर पनि गीत रचना गर्न सकिन्छ जहाँ ठेट भाकालाई समातेर केही पारीमार्जित गरेर गाईने हुँदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई विस्थापित गरेको छैन त्यसैले दुबै पक्ष बाट लोक गीत संगित उजागर भएकै देख्छु त । कोठामा बसेर गीत लेख्दैमा मौलिकता हराउदैन, यो त कलाकारको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो । कहिलेकाही यात्राा गर्दा त्यहाको माहोल देखेर त्यसको गहिराईमा गएर आशु कवीका रुपमा पनि गीत रचना हुन्छ।
किन कपि नभएको
नेपालको कार्यक्रम माध्य स्मरणिय कुरा के छ र ?
देशभरी मेला, जात्रा महोत्सबमा पाउने दर्शक श्रोताको माया नै स्मरणिय भएको छ । नेपाल भरी लोक संगित प्रेमी दर्शक हुनुन्छ अझ सुदुर पस्चिमका दर्शकको माया स्मरण योग्य छ ।
गायिका नभएको भए कला लम्साल के हुने थियी र ?
हा हा हा यो कर्म गर्दै जादा थाहा हुने कुरा हो, मलाई सानोमा बुवाले नेपाल आर्मिको अफिसर बनाउन चहानुहुन्थ्यो भने मुमाले असल शिक्षिका बनेको हेर्न चहानुहुन्थ्यो त्यसैले यि दुई मध्य एक पक्कै बन्थे होला ।
ब्यक्तिगत कुरा तर्फ जाउ , बिहे गर्नु भो र ?
हा हा हा भो बिहेको कुरा नगरम् भो ।
लोक गीत संगितमा बिक्रिती बढीरहेको छ यस्तो समयमा बिक्रिती रोक्न कला लम्सालले के के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ र ?
हो केही बर्ष देखी लोक गित संगितमा बिक्रिती फैलदो छ । मेला महोत्सबमा उत्ताउला र छोटा कपडा लगाएर गीत गाउँने कलाकार पनि छन् समाजमा म नाम लिन चहान्न तर त्यताले लोक सस्क्रितीको मर्म नै बुझेको हुँदैनन् । मिडियाले त्यस्ता कलाकारलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । मिडियाले भाउ दिए पछी त बिक्रिती बड्छ नि, तर म त्यस्तो छोटा कपडा लगाएर उत्ताउले गाउँने गायिका होईन मलाई आफ्नै पारीबेसका लोक भाखाको माया छ । त्यसैले म तपाई जस्तो बौद्धिक पत्रकारले हामीलाई साथ दिनु पर्छ । पुराना गीत संगितको स्तर र अहिलेको स्तरमा धेरै फरक छ । पहिलेका गायक गायिकाले गीतमा जीवन भर्थे तर अहिलेका कलाकारले छोटो र सस्तो लोकप्रियाताको पछी दौडेका छन यो राम्रो होईन । यस्तो कार्यले नेपाली लोक संगितले जीवन पाउदैन । मेरो सेरोफेरोबाट
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख २५, २०७५ 12:42:39 PM
आन्तरिक पर्यटकलाई सहुलियत दिदै प्याराग्लाइडिङ संञ्चालन
घरेलु श्रमिक बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण